`एन्जल´ले गोलि लागेर ढल्नुअघि के के गरिन् ? म्यानमार आन्दोलनमा मारिएकी १९ बर्षीया युवतीको सपना | Yangwarak Focus
Home मुख्य खबर `एन्जल´ले गोलि लागेर ढल्नुअघि के के गरिन् ? म्यानमार आन्दोलनमा मारिएकी १९...
`एन्जल´ले गोलि लागेर ढल्नुअघि के के गरिन् ? म्यानमार आन्दोलनमा मारिएकी १९ बर्षीया युवतीको सपना
२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:३३
फाल्गुन २२ सनिबार
बीबीसी । म्यानमारमा सैनिक कूविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर मारिएकी १९ वर्षिया किशोरीको अन्त्येष्टिमा बिहीवार मान्डलेमा ठूलो भिड जम्मा भएको थियो।
एन्जल भनेर चिनिने क्याल सीन गोली लागेर ढल्दा उनको टिसर्टमा लेखिएको थियो, ‘सबै कुरा ठिक हुनेछ।’ सामाजिक सञ्जालहरूमा उनलाई व्यापक रूपमा श्रद्धाञ्जली दिइएको छ। कैयौँले उनलाई हिरो भनेका छन् ।
गत माघ १९ गते सेनाले सैनिक कू गरेयता म्यान्मारमा सैनिक शासनको अन्त्य र बन्दी नेताहरूको रिहाइको माग गर्दै ठूला प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। अहिलेसम्म ५४ जनाभन्दा धेरै प्रदर्शनकारीहरू मारिएको राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले जनाएको छ। बुधवार मात्रै त्यहाँ विभिन्न स्थानमा ३८ जना प्रदर्शनकारी मारिएका थिए ।
म्याट थूले गत चुनावमा पहिलो पटक भोट खसालेकी एन्जल एक प्रसन्न केटी भएको बताए। ‘उनले परिवारलाई र परिवारले उनलाई निकै माया गर्थे,’ उनले भने, ‘हामी युद्धमा छैनौँ । सर्वसाधारणमाथि गोली चलाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
मानिसहरूले एन्जललाई सामाजिक सञ्जालमा पनि श्रद्धाञ्जली दिएका छन् । एकजना साथीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मेरो मुटुले निकै दुखेको अनुभव गरेको छ ।’ अर्काले लेखेका छन्, ‘चिरशान्तिको कामना साथी, हामी यो क्रान्तिमा अन्तिमसम्म लड्ने छौँ ।’
उनले व्यापक प्रदर्शन र घटनाक्रमको अनुगमनमा रहेको अप्ठेरोका कारण उक्त सङ्ख्या निकै धेरै पनि हुनसक्ने बताइन् । म्यान्मारको सेनाले मृत्युबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
तस्बिरमा मृतक एन्जल
Previous articleकोरोना अपडेट: शुक्रबार थप १२० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
Next articleसाहित्यकार महासङ्घको तमुवान राज्य समिति गठन संयोजकमा छम गुरुङ चयन
Yangwarak Focus (Amir) - २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:३३
सुमन सहयात्री - २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:३३
याङ्वरक फोकस - २२ फाल्गुन २०७७, शनिबार १३:३३